Plop Boot Manager ukuqala ngependrives ze-USB | Iindaba zeGajethi
Ngamaxesha amaninzi sicebise abafundi bethu ukuba banakho ukuhambisa yonke inkqubo yokusebenza kwi disk drive I-CD-ROM kwi-USB. Inyathelo elidlulileyo loku linokufuna uguqulo oluncinci lwale CD-ROM inye (kunye nenkqubo yokusebenza ngaphakathi) kumfanekiso we-ISO.
Ukuba sithobele le mfuno, akusayi kuba nzima ukufumana esinye sezixhobo ezininzi ezinokusinceda ukuba sihambise konke okuqulathwe koku ISO umfanekiso kwintonga ye-USB. Ingxaki inokwenzeka ukuba ikhompyuter (i-desktop okanye ilaptop) kunye nezibuko layo le-USB, ine-BIOS apho Ayikwazi ukuseta i-boot order, Oko kuthetha ukuba akukho xesha sinokuyalela ukuba le pendrive ye-USB ithathelwe ingqalelo ukuqala ufakelo kunye nesincedisi esithe. Enkosi ngesixhobo esincinci esibizwa ngokuba yi "Plop Boot Manager" into engenakwenzeka iba yinto enokwenzeka, into esiza kuyikhankanya apha ngezantsi ukuba ukhe waqubisana nale meko ilusizi kwikhompyuter yakho yakudala.
1 Isebenza njani i- "Plop Boot Manager" kwikhompyuter yam?
2 Inketho 1 noMlawuli weBoop Plop
3 Inketho 2 noMlawuli weBoop Plop
Isebenza njani i- "Plop Boot Manager" kwikhompyuter yam?
Umphathi wePlop Boot sisixhobo esincinci onokuthi usisebenzise ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo, kuba zezi zilandelayo:
Ukufaka kunye nokumisela esi sixhobo emva kokuba iWindows iqale.
Sebenza ngesi sixhobo ukuba asikazifaki iiWindows.
Sikhankanye iWindows njengenkqubo yokusebenza yokufaka kwikhompyuter yakho, nangona umsebenzisi enokuba neentlobo ezahlukeneyo zeemfuno (njengokufaka Ubuntu kwezi khompyuter zindala). Ukuba sine-pendrive yethu ye-USB kunye nenkqubo yokusebenza ngaphakathi kwaye ikhompyuter yakho ine-BIOS engasivumeli ukuba siyikhethe ukuqala, emva koko unokulandela enye yezi ndlela zimbini siza kuthi zikhankanywe apha ngezantsi, kuxhomekeke kwisidingo onaso ngomzuzwana othile.
Inketho 1 noMlawuli weBoop Plop
Makhe siqwalasele ukuba sineWindows efakwe kwikhompyuter yethu kwaye sifuna ukongeza enye inkqubo yokusebenza, enokuthi ibe njalo Inguqulelo yeLinux esiyidibanise kwi-pendrive ye-USB. Sicebisa ukuba ulandele la manyathelo angezantsi ukuze ufezekise le njongo:
Qala iseshoni yakho yeWindows ngokupheleleyo.
Khuphela ku «Plop Boot Umphathi»Ukusuka kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye ukhuphe umxholo wayo.
Zulazula kwi "plpbt -> Windows" ifolda.
Fumana i "FakaToBootMenu.bat" ifayile kwaye uyiqhube ngamalungelo omlawuli.
Ngokukhawuleza i "command terminal" iya kuvela, apho umsebenzisi abuzwa ukuba uqinisekile ukwenza lo msebenzi; ukuba siphendula ngokuthi ewe (ngo «no») utshintsho oluncinci luya kwenziwa kwifayile yokuqalisa, esinokuqinisekisa ngayo ukuqala kwakhona okulandelayo kwekhompyuter.
Iwindow efana kakhulu nale siyibeke kwinxalenye ephezulu yile uyibonayo, apho inkqubo yangoku yenkqubo izakubakhona kwindawo yokuqala ngelixa kwindawo yesibini kuzakubakhona i "Plop Boot Manager" , ngokufanayo nokukhethwa izakuqala ikhompyuter ngentonga ye-USB oyifakileyo.
Inketho 2 noMlawuli weBoop Plop
Indlela ebesiyicebise ngasentla yenye yezona zilula ukuyilandela, nangona kufuneka siqwalasele imeko eyahlukileyo esinokuthi siyibone nangaliphi na ixesha. Umzekelo, ukuba ikhompyuter yethu ayinayo inkqubo yokusebenza efakiweyo kwaye sinayo intonga ye-USB elungele ukusetyenziswa ukuqala olu fakelo, emva koko kuya kufuneka sikhethe le ndlela yesibini.
Ngale nto sicebisa ukuba uye kwakule dilesi ye-URL uyikhankanyileyo ngasentla kwaye fumana ifayile ye-ISO, apho kuya kufuneka ukuba gcina (tshisa) kwi-CD-ROM disc; mhlawumbi komnye umntu into ebesiyicebisile inokubonakala ingekho ngqiqweni, kuba ukuba siqala idiski yethu ye-CD-ROM nge «Plop Boot Manager», ukusuka apho singaqala ukufakelwa kwenkqubo yokusebenza ukuba sinediski efanelekileyo. Ngelishwa ukuba asinayo kwaye endaweni yoko, sinesiphathi se-USB esinenkqubo yokusebenza ekulungele ukufakwa, emva koko sinokuqala ikhompyuter ngeCD-ROM (kunye noMphathi weBoot Boot ngaphambili watshiswa ngomfanekiso we-ISO) kwaye ulinde umyalezo we-bootloader.
Iscreen esifana nale siyibeke kwinxalenye ephezulu yile uyibonayo, phi Ipendrive ye-USB ekufanele ukuba siyifakile ngaphambili iya kuvela kuluhlu kwelinye lamazibuko ekhompyutha. Xa oku kusenzeka, inkqubo yofakelo yenkqubo yokusebenza ekhoyo kule pendrive ye-USB iya kuqala kwangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Plop Boot Manager: Qalisa nge-USB Flash Drive kwikhompyuter ene-BIOS engahambelaniyo
Isebenza phakathi kwam xa ndiyinika usb isikhombisi sihlala sikhanyisa kwaye ukusuka apho akwenzeki
I-HP Onmibook XE3
Umhlobo obalaseleyo !! Isebenze ngokugqibeleleyo kum
Ukhetho olukhulu 1 lundisebenzele enkosi mhlobo
USebastian Rodriguez sitsho
Ukhetho lokuqalisa aluveli 🙁
Phendula uSebastián Rodríguez
URafa rivero sitsho
Isebenza zombini iindlela, kodwa ndinengxaki: andinayo iCD / iDVD drive. Ke ngoko, ndifuna ukwazi ukuba ikhona enye indlela yokuba ngomnye umatshini (ukubeka idiski kwenye ikhompyuter) ndinokwenza isahlulelo okanye ndisebenzise idiski yonke kwaye ndikope iifayile eziqala ngeMenyu yolawulo lwePlop Boot kwaye xa ubuya idiski kumatshini wam ukuze ndikwazi ukuqala umphathi wePlop Boot kwidiski kwaye emva koko uqalise ufakelo nge-USB.
Ukuba uyazi nangayiphi na indlela yokwenza oku okanye undwendwe, ndingavuya kakhulu ukuba ungandixelela ukuba ndenze njani. Ndiyabulela kwangoko.
Qaphela: Ndiyenzile into endikuchazele yona nge-grubinstaller endenze ngayo i-MBR emva koko ndakopa umfanekiso we-ISO kwisahlulelo seHard Disk kwaye ndakwazi ukuqala ufakelo kodwa ekugqibeleni ivelisa impazamo engenakho ukuyifaka "grub" kwaye ufako aluqhubeki. Iyakwenza oko ukuba ndiza kuyifaka kwenye i-Hard Drive kwaye nokuba ndizenzela ngokwam isahlulelo ngasinye.
Phendula kuRafa Rivero
Inkqubo egqwesileyo yandikhonza, eyona nto imbi kukuba yenza olo hlobo "lwe-dualboot" engaqhelekanga, kodwa nokuba kunjalo ukuba bendikwazi ukuqala inkumbulo ye-usb, enkosi.
Ikhetho lesibini lisisiyatha ngenene, ukuba ndinexesha lokutshisa i-cd nge-boot, kuba isihogo andizukukwazi ukutshisa ii-windows xp ... kuphela kukudodobala okunokwenza ububhanxa.
Eyona nto isisiyatha yingcaciso yakho, yokuba awufumani naluphi na usetyenziso lwenketho yesibini ayiyenzi inkqubo eluncedo, eyenzeka kum yile:
Ukuba nee-distros ezininzi eziphilayo, okanye ii-USB boot installers, ngaba ukuzitshisa nganye kwi-cd / dvd kunokuba "sisidenge" kunokuba nazo nganye kwi-usb yakho kunye ne-cd enye ukuqala kubo?
Vuyelwa Crack 😀
UYesu Ramirez sitsho
Mva kwemini, ndifuna ukufaka i-W7U kwi-USB kuphela, andinamdla wokuqala kule yunithi, ingxaki kukuba ukhetho lwe-USB alubonakali kwi-Boot Menu, ngaba ikhona indlela yokuyongeza kwi-Bios? Okanye ngaba le nkqubo iyayisebenzela naloo nto?
Phendula Jesús Ramírez
Isebenza phakathi, kwinxalenye apho ithi umqhubi; Ndisebenzisa le ithi usb kwaye ndothukile kwaye andisuki apho.
Ngelishwa kum ndizamile zombini ezi ndlela, xa ndifika ndaza ndakhetha i-USB ukuba ikhusele umfanekiso, yipc endala kakhulu endizame ukuyivusa ngoku ngenxa yokuvalelwa yedwa, imibuliso evela eHERMOSILLO, SONORA MEXICO
Isebenzile kum kodwa kuye kwafuneka ndiqale iplop kwenye ikhompyuter kwaye ndiyifake ndisebenzisa intambo yenethiwekhi kuba ibingenayo i-CD yokufunda
Ndizamile indlela yesibini kwaye ndakhetha ukhetho lwe-USB inkqubo emileyo.